Soo-saareyaasha Soosaarayaasha & Shirkadaha Cuntada ee loo yaqaan 'Raw Boldenone Acetate' iyo Warshadaha - Warshadda
Root Boldenone Acetate budada (2363-59-9)
Root Boldenone Pure Acetate waa nooc ka mid ah Boldenone. Waa steroid anabolic anterolic ah oo wax laga beddelo by esterat ester. Dareemayaashu waxay saameyn ku yeeshaan xaddiga nuugista daroogada iyo noloshii nuska ama muddada waqtiga daawada ay daaweynteeda ama waxqabadka jidhka ee loogu talagalay.
Qalabka Root Boldenone Acetate (2363-59-9) video
Root Boldenone Acetate budada (2363-59-9) Sharaxaad
budo qaydhiin Boldenone copolymer noqon lahaa dheeraad ah oo aad u daran in kiciyo unugyada dhiigga cas, la kordhiyo rabitaanka cuntada, iyo repaire unugyo kaas oo sidoo kale waa lagu daray weyn bodybuilders inta lagu guda jiro tababarka. Root Boldenone Pure Acetate waxay noqonaysaa cirbad xanuun. steroid Tani waxaa ku jirto 25mg / ml of boldenone hormone attatched in Ester copolymer iyo 75mg / ml of boldenone hormone attatched in Ester propiopate ah ee. Lahaanshaha Boldenone attatched in ay esters kuwaas oo u oggolaanaysa in ay kor u heer dhiig si deg deg ah halkii iyo saamaynta uu ku noqon karo ka dhaqso badan kuwa ku aragnay Ester u gaabis ah ee Equatorial dhaqanka. Tani naxa doonaa ciyaartoyda dooneysa inay ordi wareegyada gaaban iyo kuwa ka welwelsan tahay baaritaanka daroogada soo noqnoqda oo u baahan si ay u awoodaan in ay nadiifiso hormoonnada ka nidaamka hab wakhti.
Root Boldenone Acetate budada (2363-59-9) Smamnuucista
Product Name Root Boldenone Pure Acetate
Magaca Kiimikada 2363-59-9; Boldenone Acetate; BOLDENONE 17-ACETATE
brand NAme Taariikhda aan la heli karin
Fasalka Daroogada Anabolic / Androgenic steroids
Molecular Wsideed 328.452 g / mol
Monoisotopic Mass 328.204 g / mol
barafku Psaliid 125-130 ℃
karisaaning Psaliid 443.6 ° C at 760 mmHg
Color Caddaan cad ama midab cad ama cad cad oo huruud ah
Storage Temperature Heerkulka qolka
Application Boldenone Acetate budada waa steroid anabolic. Boldenone. Root Boldenone Pure Acetate loo isticmaalo daawada xoolaha. Bao Dan ketone waxay noqon kartaa muruq iyo koboc dhaqaale oo xasillan oo xasilloon.
Waa maxay macdanta Raw Boldenone Acetate (2363-59-9)?
Boldenone Acetate budada waa stero-yada anroly ee laga soo qaatay testosterone. Waxay leedahay hindhis gaas ah oo ficil degdeg ah kaas oo keena walxaha degdegga ah ee lagu shubo dhiigga, ka duwan cypionate iyo undecylenate taas oo qaadata maalmaha 2. Waa maxay tilmaamida walaxdani waa dhererka wareegga oo u baahan in la sii dheeraado si loo helo saameyn anabolic ah.
Boldenone acetate budada waa nooc isbedel ah oo ah testosterone oo leh lahaansho dammaanad ah oo kaarar ah 1 iyo 2. Tani waxay yaraynaysaa awooddeeda ay ku aruuriso estrogens iyo awooda korontada. Waxay leedahay lahaansho ah acetic acid oo loogu talagalay kooxda 17-beta hydroxyl.
Boldenone powdered acetate waxay si weyn u kordhisaa kobcinta borotiinka iyo tirade unugyada dhiigga cas oo macnaheedu yahay in nafaqooyinka lagu qaado dhamaan jirka oo si wax ku ool ah waxtar u leh.
Sida Root Boldenone Acetate budada (2363-59-9) shuqullada
Boldenone acetate ester waxay leedahay sifooyinka gaarka ah ee steroidkan. Mid ka mid ah faa'iidooyinka boldenone acetate budo waa qaabkeeda, taas oo aan ka dhigi karin in loo badalo estrogen. In kastoo, waxay leedahay ilmo si ay u keento dhibaatooyinka estrogen qaarkood haddii loo isticmaalo qadar sare, samaynta biyaha ku sii dhawaansho iyada oo aan ku jirin arrin aan jirin oo la barbar dhigo xeryahooda kale. Tani waxay ka dhigaysaa boldenone acetate budada doorasho wanaagsan oo loogu talagalay cayaaraha adkeysta ee aan dooneynin in ay socdaan biyaha marka ay ordaan, dabaasha, ama baaskiilka. Waxaa intaa dheer, boldenone acetate budada ayaa sidoo kale leh saameyno fudud oo ay isticmaalaan dadka isticmaala warbixinno aad u yaryar oo hodan ah iyo isbeddellada cuntada qaarkood (kuwaas oo faa'iido u leh kuwa isku dayaya in ay yareeyaan bulkada). Tani waxay ka dhigaysaa noocyadan "steroids" doorasho wanaagsan oo loogu talagalay kuwa doonaya in ay ku daraan caanaha. Maaddaama boldenone acetate loo yaqaan 'ester' ka samee 'ester' ayaa leh qaali gaaban marka loo eego nooca aan qarsoodi ahayn, waxaad gaabin kartaa wareegga si aad u hesho natiijooyin degdeg ah adoon sugin todobaadyo.
Root Boldenone Acetate budada (2363-59-9) Qiyaasta
Boldenone acetate waa in lagu ordo saacadaha 300-700 asbuucii,
iyadoo cirbado la sameeyo ugu yaraan maalmo kasta 2-3.
Root Boldenone Acetate budada (2363-59-9) Faa'iidooyinka
Boldenone Acetate ayaa si wax ku ool ah loogu dari karaa labadaba "jarida" iyo "dhejinta" labadaba sababtoo ah saamaynta si isku dheelitiran ee maaddadaas anabolic. Isticmaalkan steroids wax yar ayuu aromatizes, oo sidaas daraaddeed soo saare ku dhowaad lahayn saameyno estrogenic ah sida haynta biyaha ama "gyno".
Astaantani waxay sidoo kale si isdaba joog ah u kordhisaa suurtogalnimada borotiinka iyo qaabka unugyada dhiigga ee cas, macmacaanku wuxuu ku xiran yahay nafaqooyinka jirka oo dhan si wax ku ool ah. Sidaa darted, Boldenone Acetate wuxuu awoodaa in uu isticmaalo waxtar badan oo cunto yar, kor u kaca awoodiisa oo ah hormoon si waxtar leh loo isticmaalo marka "goynta".
Sidoo kale, tirada unugyada dhiigga ee kordhaya ee ay keento steroidkaan ayaa sidoo kale kor u qaadeysa gaadiidka oksijiinta ee jirka oo dhan, taas oo siinaysa cayaaraha iyo jirdhiska inay sii adkeeyaan iyo awood u yeelashada adkeynta kuliyadaha muddada dheer, taas oo caddaynaysa daroogada xitaa caansan oo ka mid ah kuwa raadinaya dufanka jirka.
Ka iibso budada Boldenone Acetate from Buyaas.com
Dufanka Bootenone Root (846-48-0)
Dufanka Boldenone Undecylenate (Equipoise) (13103-34-9)
Root Boldenone Cypionate budada (106505-90-2)